Sat, Jul 21, 2018 | 17:29:38 NST
कञ्चनपुर, फागुन २ – शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसे मैदानमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको कार्य सुरु गरिएको छ ।
रोमियोले ९ वर्षदेखि नभेट्टाएको जोडी यस पल्टको भ्यालेन्टाइनमा भेट्टाउला त ?
माघ २७ – अनलाइनबाट विवाहका लागि जोडी खोजेको त नौलो कुरै भएन । तर अनलाइनबाटै भ्यागुताका लागि जोडी खोजेको कुरा भने नौलो हुनसक्छ ।
चितवन, माघ २६ – कम्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान) चितवनको आयोजनामा बिहीबारदेखि चितवनको भरतपुरमा ‘तेस्रो डिजिकम क्यान इन्फोटेक–२०७४’ सुरु भएको छ ।
​एनसेलले ल्यायो भ्यालेन्टाइन अफर
काठमाडौं, माघ २४ – एनसेलले भ्यालेन्टाइनलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्याक ल्याएको छ ।
हुम्ला, माघ २४ – आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरपरिवारलाई वैकल्पिक उर्जाको लागि सोलार वितरण गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न इलाममा इलेक्ट्रिक हाजिरी
इलाम, माघ २४ – इलाममा विद्यालय सुधार गर्न इलेक्ट्रिक हाजिरी सुरु गरिएको छ ।
​सामसङ ‘जेटू फोर जी’ नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं, माघ २४ – सामसङले नेपाली बजारमा जेटू फोर जी एडिसन मोबाइल फोन ल्याएको छ ।
काठमाडौं, माघ २३ – सामसङ नेपालको सबैभन्दा ठूलो एवं विश्वासिलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सामसङले ट्याब ए नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ, जुन मनोरञ्जनको लागि उत्कृष्ट बन्ने छ ।
हात देखाउँदा पानी आउने सेन्सर धारा प्रयाेग गर्ने बढे
पाल्पा, माघ २३ – पानीको बचतका लागि धारामा हात देखाउँदा मात्र पानी झर्ने सेन्सर धाराको जडानप्रति पाल्पाका होटल व्यवसायी आकर्षित हुन थालेका छन् ।
​पूर्वमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा नेपाल–रुस विज्ञान समाज गठन
काठमाडौं, माघ २२ – पूर्व विज्ञानमन्त्री गणेश शाहको अध्यक्षतामा नेपाल–रुस विज्ञान समाज गठन भएको छ ।
नेपाल टेलिकमले यो आर्थिक बर्षमा १५ अर्व ३७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
टेलिकम १५ औं वर्षमा, फोरजी सेवा देशभर विस्तार गर्ने तयारी
काठमाडौं, माघ २२ – नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकमले सोमबार वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ ।
नेटवर्क खोज्दै डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता
इलाम, माघ २१ – इलामको रोङ्ग गाउँपालिकाको साविक जिर्मले गाविसमा टावर निर्माण भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रयोग विहिन छ । टावर भएपनि सञ्चालनमा नआएकाले नेटवर्क खोज्दै हिड्नुपर्ने स्थानीयको समस्या रहेको छ ।
काठमाडौं, माघ १८ – नेपालमा विश्वासिलो स्मार्ट फोन ब्राण्डका रुपमा स्थापीत सामसुङले ग्यालेक्सी ‘एएट प्लस’ बजारमा ल्याएको छ ।
फेसबुकले समाजमा प्रभाव पार्ने सामग्री मात्र प्रवर्द्धन गर्ने
माघ १८ -फेसबुकले अब समाजमा प्रभाव पार्ने भिडियोलाई मात्र देखाउने भएको छ ।
​कस्तो हुनेछ एप्पलको नयाँ फोन ?
सन् २०१८ मा एप्पलले नयाँ तीन किसिमको आइफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
क्यान इन्फोटेक – नेपालीले विकास गरेका प्रविधिमा आकर्षण (फोटो फिचर)
सूचना प्रविधिको मेला क्यान इन्फोटेक काठमाडौंमा चलिरहेको छ । कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल क्यानले आयोजना गरेको मेलामा पछिल्लो समय विकास भएका प्रविधि मुख्य आकर्षण हुन् ।
माघ १४ – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अब विश्वसनीय समाचारलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।
सिन्धुली, माघ १३ सिन्धुलीमा हावाबाट बिजुली उत्पादन भएको छ ।
काठमाडौं, माघ ९ – प्रदेश नं. ६ र ७ का अधिकांश जिल्लामा नेपाल टेलिकमको ल्याण्डलाइन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
​फेसबुकमा समाचार पढ्नुहुन्छ ? अब फेसबुकमा समाचार कम देखिनेछ !
काठमाडौं, पुस २८ –समाचार, व्यवसायिक ब्राण्ड तथा मिडिया सम्बन्धीको फीडका मामलामा फेसबुकले विशेष परिवर्तन गर्दैछ ।
काठमाडौं, पुस २८ – नेपाल, आजदेखि चिनियाँ बाटो हुँदै इन्टरनेटको विश्व सञ्जालमा जोडिएको छ ।
काठमाडौं – सोसियल इकमर्स साइट सगुनले आफ्नो एन्डोइड मोवाइल एप मंगलबार नयाँ दिल्लीबाट सार्बजनिक गरेको छ ।
सगुनको मोवाइल एप सार्वजनिक (लाइभ)
काठमाडौं, पुस २५ – सगुनको मोवाइल एप अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं, पुष २३ – एनसेलले आफ्नो फोरजी सेवालाई विस्तार गरेको छ । शनिबार देखि सिराहा र धनगढीका एनसेल प्रयोगकत्ताले फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् ।
पुस २१ – कम्प्युटर चिप्समा देखिएका दुई प्रमुख त्रुटीका कारण आइफोन, आइप्याड र म्याकबुक (ल्यापटप) प्रभावित भएको एप्पलले जनाएको छ । यो हप्ता मेल्टडाउन र स्पेक्टर बगका कारण कम्प्युटर तथा मोवाइलमा समस्या देखिएको थियो ।
रसुवा, पुस २० –रसुवाको ४ वटा कार्यालयमा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट जडान गरिने भएको छ ।
सन् २०१७ : विज्ञान प्रविधिका ८ ‘ब्रेक थ्रु’
वर्ष २०१७ मा पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै नयाँ कुरा भए । यसमा स्पाइनलकर्डमा लागेको चोटका कारण भएको प्यारलाइसिसको उपचारमा देखिएको सकारात्मक संकेतदेखि ३६० डिग्रीको सेल्फी क्यामरासम्म रहेका छन् ।